Waaheen Media Group » “Cirro Waxaa Ka Muuqatay In Aanu Adkaysi U Lahayn Culayska Siyaasadda” Muuse Biixi
Browse:Home Videos “Cirro Waxaa Ka Muuqatay In Aanu Adkaysi U Lahayn Culayska Siyaasadda” Muuse Biixi
“Cirro Waxaa Ka Muuqatay In Aanu Adkaysi U Lahayn Culayska Siyaasadda” Muuse Biixi
Published by Waaheen Media on September 23, 2015 | Comments Off on “Cirro Waxaa Ka Muuqatay In Aanu Adkaysi U Lahayn Culayska Siyaasadda” Muuse Biixi
Hargaysa(Waaheen) Guddoomiyaha xisbiga talada haya ee KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa sheegay in feedhkii guddoomaha Golaha Wakiillada Md. Cabdiraxmaan Cirro ku garaacay ku-xigeenkiisu su’aal gelinayo adkaysiga uu u yeelan karo culayska siyaasadeed ee Somaliland.
Md. Muuse Biixi oo hadal ka jeediyey shir-saxaafadeed lagu shaaciyey qabsoomidda shirka golaha dhexe ee xisbiga KULMIYE oo xarunta Madaxtooyada lagaga dhawaaqay shalay, waxa uu ku dooday in xubnaha shirguddoonka wakiilladu wada leeyihiin canaanta dagaalkii gacan-ka-hadalka ahaa ee dhexmaray horraantii bishan September, balse aanay milgaha ku jirin in feedhka uu adeegsaday guddoomiye Cirro.
“Gacan-ka-hadalkii dhexmaray shirguddoonka Golaha Wakiillada, sharaf-dhac iyo foolxumo ayuu ku ahaa qaranka Somaliland, iyada oo labada odayba canaanta wada leeyihiin, haddana Soomaalidu waxay tidhaahdaa, (haddii qoonni timaad qardabo hadhay!) Sidaa darteed, guddoomiyaha (Cirro) inuu gacan qaado milgaha may ahayn hadduu ku gefay Ku-xigeenkiisu, laf-jabka ugu weynna waxa uu ahaa markii laga daawaday warbaahinta guddoomiyiihii oo feedh ku garaacaya Ku-xigeenkiisa, muuqaalkaasina wuxuu su’aal gelinayaa adkaysiga iyo taxamulka qofku u yeelan karo culayska siyaasadeed,” ayuu yidhi Guddoomiyaha KULMIYE.
Waxa kaloo uu ku eedeeyey xisbiga WADDANI inuu isku raacay taageerada gacan-ka-hadalkii gefka ahaa ee guddoomiyo Cirro ku qaaday Md. Baashe Maxamed Faarax, waxaannu yidhi; “Waxa dareenkeeda leh, iyada oo hal-doorkii xisbiga WADDANI guddoomiyahooda si qayaxan ugu taageereen gacan-ka-hadalkii. Waxay taasi tilmaamaysaa in xisbiga WADDANI isku raacsan yihiin gefka gacan-ka-hadalka guddoomiyohooda, waana arrin khalad ku ah curfiga siyaasadeed ee Somaliland.
Xisbiga WADDANI waxaynnu waydiinaynaa xilalka qaranka miyaan lagu iman doorasho? Madaxwaynaha, ku-xigeenka, xildhibaannada iyo shir-guddoonkooduba miyaannu distoorku qeexayn inay ku imanayaan doorasho? Mise kursiga WADDANI ku fadhiistaa waa lama taabtaan?”
Sidoo kale, Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE waxa uu markii u horraysay ka hadlay khilaafka siyaasadeed ka dhashay kiraynta Haamaha Shidaalka Berebra, “Arrinta la xidhiidha haamaha shidaalka ee la hadal-hayo, habka maamulka ee xukuumaddu u qorshaysay kama uu soo gudbin Golaha Xukuumadda. Ma aragno heshiis xukuumaddu cid la gashay oo ay u soo gudbisay Golaha Wakiillada, arrintaasna weli waxa gacanta ku haysa oo ka baaraan degaysa xukuumadda, sidaa darteed dadka arrintaas faallaynayaa ha sugaan marka heshiiskaasi ka soo dhammaado xagga xukuumadda. Ciddii talo haysaa waxay u gudbin kartaa xukuumadda. Waxaynnu nahay dad talo wadaag leh oo is dhegaysanaya. Sawaxanka siyaasadeed ee mucaaridku horboodayo maaha talo soo jeedin ee waa goolaaftan siyaasadeed. Si kastaba arrinkani waa arrin maamul oo masuuliyadeed.”
Waxa kaloo uu ka jawaabay hadal ka soo yeedhay madaxweynaha Soomaaliya oo meel-ka-dhac ku ahaa qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland.
“Inteennii maqashay maalmahan madaxwaynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu Muqdisho ka yidhi, ‘Shirka Fedaraalka ah mabda’iyan Somaliland way ku jirtaa, waxaanan eegaynaa farsamooyinkii ay uga qaybgeli lahaayeen.’ Ninbaa laga hayaa arrin uu ka yaabay; ‘ninka yidhi waxbaan gani aniga gol iyo cayn jooga ee yidhi baddii Garcad yaan gudub u waydaarin godka lagu cadaabyoow, muxuu go’uhu been sheegay.’ Weedhaasi waa mid gef iyo meel ka dhac ku ah qarannimada Somaliland. Waa gardarro badheedha, waa mid sii kala fogaynaysa shacbiga Somaliland iyo Soomaaliya. Somaliland magan ugama aha qarannimadeeda, Ilaahay mooyaane cid kale. Xasanoow, dantu waxay ku jirtaa in aynnu noqonno laba qaran oo daris ah oo is ixtiraama,” ayuu yidhi Md. Muuse Biixi Cabdi.